Isokhethi PPR umshini wokushisela
Amathuluzi wokuhlanganisa isokhethi asebenzisekayo asetshenziselwa i-PP-R, i-PE, i-PERT, amapayipi we-PB nokufakwa. Izinzuzo >> Isikrini sokubonisa sedijithali esihlukile, ngokusho kwento ehlukile, singalungisa ukushisa okuhambisanayo. >> Uhlobo olulodwa lwesitendi esisekayo esikhiphekayo, i-welding ezinhlangothini eziningi. >> Iqoqo lesikrufu esizinikele, esilungele ukusebenzisa nokuphatha. >> Isistimu yokulawulwa okuhlakaniphile kwe-elekthronikhi, ingabona isinxephezelo sokushisa okuzenzakalelayo. >> Ukushisa isikhawu sig ...
Ishidi Lezobuchwepheshe: Umshini wokusika ipayipi lobuchwepheshe, ukusika okunembe kakhudlwana nomsebenzi osebenza kahle. kulula ukuphatha. Isisindo somshini wonke singu-7.5 kg. Imodeli engu-220 ingasika amapayipi ebangeni elingu-15mm ~ 220mm ububanzi. Ubukhulu bodonga lwamapayipi wensimbi ngu-8mm, ubukhulu bamapayipi epulasitiki ngu-12mm, futhi ubukhulu bensimbi engagqwali bungu-6mm. Awukho umsindo futhi akukho spark ngesikhathi sokusika. Ubuso bokusika bushelelezi ngaphandle kwe-burrs, umsebenzi awukhubazekile, futhi ijubane lokusika ...
Ipulasitiki Yesandla Esikhipha
Ishidi Lemininingwane Yezobuchwepheshe: Imodeli: I-SDJ3400 Voltage: Amandla Amandla Ezimoto Adlula Amandla: 1300W Metabo Hot Air Power: 3400W Lesiter Welding Rod Heating Power: 800W Extruding Volume: 2.5kg / h Welding Rod Diameter: ф3.0mm-4.0mm, 5.0mm can be Isibhamu esenziwe ngokwezifiso se-Hand extruder kuvamise ukusetshenziselwa ukushisela i-HDPE, i-PP, i-PVDF nezinye izinto ezishisayo ezincibilikayo kumaphrojekthi afana namathangi wamanzi epulasitiki, amapayipi epulasitiki, iziqukathi zepulasitiki namashidi epulasitiki. Imodeli SDJ3400 Voltage 220V ± 5% Imvamisa 50 / 60Hz Hot Air Blower ...
IGeomembrane Welder SUDG800
Isicelo Nesici Sesici: I-SUDG800 Voltage: Amandla we-220V / 110V: 800W / 1000W Imvamisa: Izinto Ezishiselwe Ezingama-50 / 60Hz: PE / PP / PVC / EVA / ECB Welded Material Thickness: 0.2mm-1.5mm Silicon pressure roller and steel pressure roller are ongakukhetha. I-Copper wedge eshisayo nensimbi eshisayo eshisayo iyakhethwa. I-wedge eshisayo ephindwe kabili kanye ne-wedge eyodwa eshisayo ongayikhetha. Ishidi Lemininingwane Yezobuchwepheshe: Imodeli SUDG800 Incazelo Umshini Welding Womshini Wokushisa we-Geomembrane Voltage 220V (Kwenziwe ngentando eyamukelekayo) Imvamisa 50 / 60hz Power 8 ...
Umshini Welding Wokufaka Umsebenzi Nesici ulungele ukuxhuma amapayipi we-PE nokufakwa ngokuhlangana okusetshenziselwa igesi namanzi. 1.Design futhi ngokusho kwe-ISO12176 electro-fusion welder standard. Izinga eliphakeme le-MCU lisetshenziswa njengomgogodla wokulawula, ifakwe isibonisi se-LCD, yonke imingcele ye-welding ingakhonjiswa. Isisindo se-3.Light, ukusebenza okulula. 4.By real-time ukuqapha weld isimo, okungavamile Welding inqubo kungaqedwa ngesikhathi esifushane. 5. Yakhelwe ngaphakathi ...
Isicelo nesici Uhlobo lokushisela: i-weld evundlile nepayipi eligingqekayo. Uhlelo lokulawula lwamapaneli wokuthinta lwe-PLC, olukwazi ukulungisa ngokuzenzakalela ukushisa, isikhathi nengcindezi ngokuya ngamapharamitha ento esetshenziswayo., Ifanele ukushisela nokugingqa amapuleti e-thermoplastic enziwe nge-HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… 2.Control system Nokia PLC, 7-inch color touch screen-Siemens. I-3.Brand entsha ifreyimu edidiyelwe, indlela yokudlulisela ethembeke kakhulu, ezinzile emsebenzini futhi ephakeme e-pe ...